X2X Media Group အောက်တွင်စည်းရုံးရန် PIX နှင့် CODEX အမှတ်တံဆိပ်များ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
TSL ထုတ်ကုန်များသည်ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေပြီး Freaks 4U Gaming အတွက်အော်ပရေတာလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုရိုးရှင်းစေသည်
မာရှယ်သည် Zoom Block Camera အသစ်နှစ်ခုကိုပြသလိုက်သည်
EverybodyFows Live Streams ကြံ့ခိုင်ရေးပွဲများကို ATEM Mini Pro နှင့် Pocket Cinema Camera 6Ks ဖြင့်တိုက်ယူသည်
Grass Valley ၏ EDIUS X Preview Events ဆက်လုပ်ပါ
Densitron သည်အသံလွှင့်အကြံပေးချက်ဖြစ်သော Hawk Media Partnership နှင့် ပူးပေါင်း၍ စီမံကိန်းများကိုလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်
JP Delport သည် Broadcast Solutions UK ရှိမန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာကိုရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်
Sinclair အသံလွှင့်စက်သည်ဝေးလံသောနည်းပညာဖြင့် ATSC 3.0 ဘူတာကိုထွန်းလင်းစေသည်။ Covid 19 အပြီး, ဒီအသစ်ကပုံမှန်လား?
Crystal Vision သည် M-WEBKEY နှင့်အတူဗွီဒီယိုဂရပ်ဖစ်ဖန်တီးမှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပေးသည်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » X2X မီဒီယာအုပ်စုအောက်တွင်စည်းလုံးရန် PIX နှင့် CODEX အမှတ်တံဆိပ်
X2X မီဒီယာအုပ်စုအောက်တွင်စည်းလုံးရန် PIX နှင့် CODEX အမှတ်တံဆိပ်
PIX နှင့် CODEX မှကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည် X2X Media Group ကိုတည်ထောင်ခြင်းနှင့်အတူအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုတည်းကိုသာယူဆောင်လာလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ဤအမှတ်တံဆိပ်သည်စုစုပေါင်းဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ကမ်းလှမ်းမှုများကိုပိုမိုခိုင်မာစေမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုအနေဖြင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်အင်ဂျင်နီယာအားသာချက်များကိုတစ်ခုတည်းသောအောက်တွင်ထားရှိခြင်းဖြင့်သူတို့၏ခိုင်မာသောအထောက်အထားများနှင့်စျေးကွက်သို့အမှီအခိုကင်းသောလမ်းကြောင်းများဆက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
“ PIX ကDပြီလမှာ CODEX ကို ၀ ယ်ပြီးကတည်းကကျွန်တော်တို့ဟာကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါတယ်” ဟု X2X ၏ဒီဇိုင်းအရာရှိချုပ်မာ့ခ်ဒန်ဒါကပြောသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအတူတကွပေါင်းစည်းခြင်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းဟာအသင်းများအကြားအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ကြတဲ့အထင်ကြီးလောက်တဲ့စွမ်းရည်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးဒီဟာကကမ္ဘာတစ်လွှားရှိထိပ်တန်းတီထွင်ဖန်တီးသူများ၊
ရလဒ် X2X မီဒီယာအုပ်စု:
ထုတ်လုပ်မှုဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးဖန်တီးမှုစီးဆင်းမှုကိုဖောက်သည်များနှင့်မိတ်ဖက်သည့်ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆုရထုတ်ကုန်လိုင်းနှစ်ခုနှင့် R&D အဖွဲ့များ၏အားသာချက်များကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
On-set ထုတ်လုပ်မှုနှင့် post အကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပေးနိုင်သည့်ဆန်းသစ်သောဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုတီထွင်ရန်လုပ်ဆောင်မည်။
X2X ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Eric Dachs က“ ထုတ်လုပ်မှုရှုထောင့်ကအလျင်အမြန်ပြောင်းလဲနေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏တိုးတက်မှုသည်တကယ့်ကမ္ဘာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ” X2X မီဒီယာအဖွဲ့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုမြန်ဆန်။ လုံခြုံသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေးရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်ပူးပေါင်းဂေဟစနစ်။ ”
X2X ဌာနချုပ်သည်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်ဆက်လက်တည်ရှိမည်ဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီသည်နယူးယောက်ရှိအပိုအရောင်းနှင့်အထောက်အပံ့ရုံးများနှင့် Wellington, Odessa, Budapest, London နှင့် Royal Leamington Spa တို့တွင်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့နေစဉ်နှင့် Los Angeles မြို့.
ကျွန်ုပ်တို့၏မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကဏ္forများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုရထုတ်ကုန်များတွင်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များအပြင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောအသံသွင်းခြင်းနှင့်အသွင်အပြင်၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုအတွက် ဦး ဆောင်သည့်ကင်မရာရောင်းချသူများ၏ပံ့ပိုးမှုများပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောထုတ်လုပ်မှုရှုခင်းတွင်ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တီထွင်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးတွင်အတွေးအခေါ်များကိုတိကျမှန်ကန်စွာမျှဝေခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီးစီမံကိန်းအန္တရာယ်လျှော့ချနိုင်သည်။
Amisa Saari-Stout ၏နောက်ဆုံးရေးသားချက်များ။ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Arvato Systems သည် Vidispine အား Media Management & Monetization အတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည် - ဇူလိုင်လ 1, 2020
ဖုံးကွယ် r17.3 ယခုအသက်ရှင်သည်: ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ထိရောက်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်အဓိကသော့ချက်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ - ဇွန်လ 30, 2020
ERT GREECE သည်ဘက်စုံသဘာ ၀ သဘောင်္များနှင့်ပင်လယ်ရေသွယ်သွယ်သွယ်သွယ်ပို့ဆောင်သောစနစ်များနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်နေရာများစွာကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ - ဇွန်လ 22, 2020
Codex ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာ မာ့ခ်ဒန်ဒါ PIX လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် X2X 2019-11-08
ယခင်: QYOU Media သည်ကနေဒါရှိ Ethnic Channels Group နှင့်ဖြန့်ချိသည့်မိတ်ဖက်အဖွဲ့ဖြစ်သည်
နောက်တစ်ခု: NewTek TriCaster® Mini သည်ကျောင်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် Professional AV များကို UHD ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းများကိုသယ်ဆောင်လာသည်
ထုတ်လုပ်သူ / AP Casting
အယ်ဒီတာ / ကင်မရာ Talent
ကင်မရာအော်ပရေတာ / DP
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် Editor ကို